I-Psycho-therapy kanye nemisebe yethemba - I-Afrikhepri Fondation
NgoMsombuluko, Septhemba 27, 2021
Alapho ubuqiniso bemvelo benziwa ngamandla, iqiniso lempilo yengqondo lenziwa yimishini yangaphakathi ephakathi kwengqondo nomzimba. Ekuqaleni, isihloko esingaba khona sihlukaniswe namandla emvelo angahlukaniseki emithanjeni yemimoya kumuntu wemvelo.
Yisiphi isimangaliso lapho umuntu akwazi ukuvela “enyakazisweni yamaBrownian” akha imvelo yasekuqaleni?
Ngamanye amagama: Yini eyayithanda uhlobo luka-Osiris Re, ubaba ongumsunguli wenqubo yezenhlalo namasiko?
Ukuvela kweqhawe eliphucukile akunakuchazwa ngaphandle kwesimo sokuthi "ukuvakashelwa" kukamama wokuqala ngumoya ophelele.
Ukufika kukababa endalweni nakwisenzo sakhe samasiko ngakho-ke kwadingeka ukuba umoya uzalwe esibelethweni sikamama. Akungabazeki ukuthi kusukela esikhathini sesibeletho kwenzeka isimangaliso sokwakhiwa okungunxantathu, "okomuntu". ". Futhi akulungile ukuthi ukhokho ulinda buthule indodana yakhe ukuthi izalwe futhi afinyelele eminyakeni yobudala (iminyaka engu-7) ukuze ayifundise.
Ngenxa yalokho, ikusasa lomuntu lidlalwa kusukela ekukhulelweni esibelethweni somama ongokomfanekiso noma cha.
Obaba abangabasunguli besintu? Ngokungangabazeki babengamadodana omama akhuleliswe ngumoya ophelele. Laba besifazane abamaka inkathi yakudala yomlando wesintu bakhonjiswa ezibalweni eziphakeme zemilingo, umbelethisi, umpristikazi omkhulu. NjengoDiotima, umsunguli odumile kaSocrates, abesifazane abavakashelwa ngumoya ophelele babengabanikazi bokuqala bolwazi, futhi amadoda athola kubo. Ekuqaleni kwesikhathi, ngokusho kwamathwasa abaNsundu base-Afrika, abesifazane babengabaphathi bamandla bonke bamaski. Amadoda avukela umbuso wawo futhi asebenzisa amandla ezembozo, "uma kungenjalo bazoba yizigqila zabesifazane".
Njengoba sikwazi ukubona, i-phallus (noma amandla okudala eZwi) akuyona ilungelo lomuntu ophethe ipipi. Ngaphambi kokuphathwa yindoda, kwakugcinwa ngayo ngowesifazane esebenzisa isimo sakhe sokuzala. Futhi ngokungangabazeki kwakusengcupheni yokwesabisa ngokuthi umama onamandla onke (owahlonzwa noNkulunkulukazi woMama wasemhlabeni wonke) waziphonsa ngomthondo wakhe wokucabanga futhi wavula amandla we-phallus (Verb), ukulamula phakathi kwakhe "izingane zakhe".
Emsukeni wesintu ngakho-ke kukhona owesifazane ovundiswe ngumoya ophelele, ephendula isifiso sakhe "sokuthena okungokomfanekiso" ukuze abalekele usongo lwenhlanya yokuphanjaniswa.
Kuyize le ndoda namuhla elawula ukudalwa kwe-phallus izama ukuyikhomba ngomthondo. Eqinisweni, akukho ngaphezu kokuthi i-phallus ekhonjwe ngamandla okuzala yowesifazane wakudala, ibingakwazi ukukhomba ipipi lowesilisa odinga ukuba namandla onke. I-phallus njengeZwi lokudala, idlulela ezimfanelweni zowesilisa nowesifazane. Ngamanye amagama, ubunye bokwehluka.
Umlando wesintu ungaphansi komthetho wokushintshaniswa kwe-phallus eyazi izikhathi zokusitheka kwelanga nokuvuka lapho yayingekho khona.
Akukho ukufa okubophezela isintu ukuthi sikhuthazelele i-ad vitam aeternam "ukuphambana okuphindiwe" komlando waso. Ilungelo lakhe lenjabulo limnika inkululeko ephelele yokuphikisa ukuphela kwalo, ngokuthi ekugcineni athole ukuhlakanipha kobaba abangabasunguli ngokuya ngokuthi "i-phallus" iyimpahla yabo bonke abantu hhayi kuphela labo abanesibopho sokummela, isikhala nesikhathi.
Ngenxa yalokho, umphathi wezinsizwa kufanele ayeke ukubona kowesifazane oqinisiwe into ayinqunyelwe kusengaphambili yokuthokozela (njengoba umuntu wobandlululo ebona kumuntu omnyama ithuluzi lokukhiqiza uNkulunkulu ayengamnika lona, ​​njengomvuzo wokuhlonipha uNkulunkulu). Sekudlulile isikhathi sezinganekwane nokusatshalaliswa kwemibono ekusebenzeni kwelungelo lokuhlambalaza futhi sekuyisikhathi sokubona ubumbano lwabantu kumehluko okwehliswe ubuntu ngokuphelele.
Ngakho-ke, ekugcineni sizokwazi ukubeka izimo ezivumelana nokuqedwa kwezinkinga zezikhathi ezithile ezifaka umlando nokubeka engcupheni ubukhona nentuthuko yesintu. Ngoba isigxobo esingazi lutho sokulwa kwamadoda, kungukuphatha (okungavunyelwe) kwePhallus.
U-GROBLI Zirignon, I-Psychoanalyst, umdwebi nomqondo wengqondo
Thenga i- € 16,83
Kugcine ukubuyekezwa ngo-Septhemba 26, 2021 11: 09 am
Bukela izingane zaseKinshasa (2012)
USandrine Ngalula Mubenga, umsunguli wemoto eyi-hybrid
UZumbi Dos Palmares, omelana nobugqila eBrazil
Manje Sengikwazi Ukusobala - Wayne Dyer (Audio)
Isitshalo sase-Afrika esiseduze kokuqothulwa siyoqeda ukusabalala kwengculazi
QHAFAZA UKUZE UBE ILUNGU